April 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
မစင်တွေကို "ပလပ်" "ပလပ်" "ပလပ်" နဲ့?
ထရပ်ကားမောင်းတဲ့ လယ်ရီဝေါ်လ်တာ ဟာ အားလပ်ချိန်တိုင်း သူ့အိမ်နောက်ဖေး မှာ ကုလားထိုင် တစ်လုံးချလို့ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းပြီး လေပေါ် မှာ ပျံဝဲနေလေရဲ့ လို့ စိတ်ကူးယဉ်နေလေ့ ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ လယ်ရီဟာ ငယ်ငယ်လေး ကထဲက လေယာဉ် ပိုင်းလော့ အလွန် ဖြစ်ချင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကင်ကနေ ကမ္ဘာမြေကြီး ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရရင်တော့ သိပ်ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးကို ရူးသွပ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတင်းစွာ အာမခံသည်။ ။
ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရင်တစုံတခု ရ ရပါစေ့မယ်လို့၊ ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်။ ။
ကျွန်တော့်အကိုကြီးလိုခင်မင်ရတဲ့ ဆရာညီညီဖေ (Jeffrey Pe )ရဲ့လက်ရာဆောင်းပါးလေးကို
ဖတ်ကြည့်ကြစေချင်လို့၊ ရှယ်တောင့်ရှယ်ခဲ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ။
Author: lubo601 | 6:28 PM | No မှတ်ချက် |
ဂစ်တာ (Guitar) သည် ဂီတ တူရိယာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ပုံစံမျိုးစုံ ဖြင့်တည်ရှိခဲ့သည်။ များသော်အားဖြင့် ဂီတာသည် ကြိုးခြောက်ချောင်းပါတက်ပြီး လေး၊ ခုနှစ်၊ ရှစ်၊ ဆယ် နှင့် ဆယ်နှစ် ချောင်းတပ် ဂီတာများလည်း ရှိသည်။
✫ သမိုင်းကြောင်း ✫
ယနေ့ဂစ်တာတွေရဲ့ ခေတ်စားမှူ့သက်တမ်းဟာ တိုတောင်းသေးတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပေမဲ့ နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
မှတ်စု အထွေထွေ, အနုပညာ
(1) I can’t hear you well.
ခင်ဗျားပြောတာ ကျနော် ကောင်းကောင်း မကြားရဘူး
(2) Tell him I’ll call back.
ကျနော်က ပြန်ခေါ်မယ်လို့ သူ့ကို ပြောပေးပါ
(3) Please tell him to call me back.
ကျနော့်ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ သူ့ကို ပြောပေးပါ
၂။‪#‎သုတဘဏ်စာတမ်းများ‬( ၄ )
ကျုပ်က စကားပြောရင် တိုတိုပြတ်ပြတ်ပြောတာပဲ ကြိုက်တယ်။
ရန်ကုန်က ကုမ္မဏီတစ်ခုက အလုပ်အင်တာဗျူးခေါ်လို့ သူဌေးနဲ့ လာတွေ့တယ်။
သူဌေးက မေးတယ်... ...
"ဘာလဲဟ သလ ဆိုတာကြီးက"
(၃)အမြင်မှန်ရဖို့ အမှန်မြင်အောင် ကြိုးစားစို့
အတန်းဖော်တွေကလဲ ဘန်ဂျမင်ဟာ တို့အတန်းရဲ့အညံ့ဆုံး။
အတန်းပိုင်ဆရာမရဲ့ အတွေးမှာလဲ ဘန်ဂျမင်ဟာ အထုံဆုံး ကျောင်းသားတစ်ယောက်။
မှတ်ချက် ။ ။ "ထူးခြားစွာ တိုးတက်မှုမရှိ (ညံ့)" တဲ့။
တခုပါ။အဲဒီ ဒေသဟာ လျှပ်စစ်မီးလည်း မရ၊ ရေလည်း
အင်မတန် ရှားပါတယ်။ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ အပါအ၀င်
ရေအရင်းအမြစ် ချို့တဲ့မှုကြောင့် ရလာတဲ့ ဒုက္ခတွေကို
ကာလရှည် ခံစားခဲ့ရတာ ပါ။ ရေနဲ့ လျှပ်စစ်မီးဟာ ဒီ
ဒေသအတွက် အခြေခံ အကျဆုံး အရေးတကြီး လိုအပ်
ယခုပညာသင်နှစ်မှာ သူငယ်တန်းကို Grade 1 လို့
ခေါ်ပါတယ်။ ရှေ့လာမယ့်စာသင်နှစ်မှာ သူငယ်တန်းကို KG လို့ခေါ်ပြီး Grade 1 ဆိုတာ ပထမတန်း ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒါကြောင့် ဒီနှစ်သူငယ်တန်း တက်နေတဲ့ ကလေး
အားလုံး ရှေ့နှစ်မှာ ပထမတန်း Grade 1 ကို သင်ရိုးသစ်နဲ့ သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရိုးဟောင်းနဲ့ သင်ရိုးသစ်( သူငယ်တန်း) ဘာ
သင်ရိုးဟောင်းသည် မြန်မာစာ အင်္ဂလိပ်စာ
သင်္ချာ သိပ္ပံ စာရိတ္တ ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ
စသည့် ဘာသာရပ်များကို အခြေခံထားသော သင်ရိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနေ့က ကျနော့်အိမ်မှာ ဟင်းမကောင်း။ စိတ်ကောက်ပြီး ကျနော်ထမင်း
မစားဘဲနေပြတဲ့နေ့။ နေ့လယ် ဆယ့်နှစ်နာရီကျော်ပါပြီ။ မိုးရွာနေ၍ အိမ်
ခေါင်မိုးပေါက်မှ ရေယိုသည်ကိုကြမ်းပေါ်မှာ ခွက်များ၊ အိုးများဖြင့် ခံထားရာ
ဧည့်ခန်း၌ ကျနော် ကြမ်းပေါ် ၀မ်းလျားမှောက်ကာ ဗိုက်တဂွီဂွီဆာနေသည့်
ဒုက္ခနှင့် ဟင်းမကောင်း၍မကျေနပ်သောဒေါသနှစ်မျိုး၏ တက်နင်းမှုကို
မောင်ထွန်းသူ ကြောက်စရာ့ရောမ (4MB)
Simon Htoo Thant
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ကို လာလည်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အများစုဟာ Bosang ရွာလေးကို ဝင်ရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိကြတယ်
အကြောင်းကတော့ အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ ဝါးခြမ်းထီးလေးတွေကို ဝယ်ယူကြဖို့ပါ
Bosang ရွာဟာ ကမ္ဘာမှာ ထီးမြို့တော်ဟု နာမည်ကျော်ကြားပြီး တစ်ရွာလုံးထီးလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးကြပါတယ်။
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတခု ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အခြေခံရမယ့်3ချက် ရှိပါတယ်....
အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဘယ်သူ့ ကိုရောင်းမလဲ။ ဘယ်သူက ၀ယ်သုံးမလဲ ဆိုတာကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထုတ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံးကို ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
( ၁ ) ရိုးရိုး ကျောက်တုံး နှင့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး ခြားနားချက်ကို စစ်ဆေးခြင်း
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး ၏ မျက်နှာပြင်တွင် အလင်းရောင် ၌အရောင်လက်သော ယမ်းပွင့်ဖတ် အကြီးအသေး ၊ ယမ်းမျှင် အကြီးအသေး များ ကျဲကျဲဖြစ်စေ ၊ စိတ်စိတ်ဖြစ်စေ အနေအထားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေသည် ။ ကျောက်စိမ်းမဟုတ်သော ကျောက်တုံး ရိုးရိုး ၏ မျက်နှာပြင်တွင်မူ ဤလက္ခဏာမျိုး တွေ့ရလေ့မရှိပါ ။
ကလေးဖျားနေစဉ် မိဘအချို့၏ မှားယွင်း လုပ်ဆောင်နေမှုများ "ကလေးငယ်ကို ဆေးတိုက်လိုက်ရင် အဖျားက ကျသွားပေမယ့် ပြီးရင် ပြန်တက် လာတာပဲ ဆရာ"လို့ ကလေးမိဘအ တော်များများက ပြော တတ်ကြတယ်။ ဒါအမှန်ပါပဲ၊ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ။ ကလေးကို ပါရာစီတမောတိုက်ရင် ဆေး ရဲ့ အာနိသင်က ငါးနာရီ၊ ခြောက်နာရီ လောက်ပဲ ခံပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ကုန်သွားရင် အဖျားက ပြန်တက်လာပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:13 PM | No မှတ်ချက် |
ရတဲ့အခက်ခဲဆုံး အချိန်တွေဟာ ကြုံတွေ့နေရတုန်းကတော့
ဖုန်းသံကြောင့် ခေါင်းထဲမိုက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့
စရာတွေစဉ်းစားရတယ်။ ဆေးရုံကိုလိုက် သွားဖို့ဘာတွေလို
မလဲ။ဘာနဲ့သွား မလဲပေါ့။ အိမ်မှာရှိတာညီအစ်မနှစ်ယောက်
တည်းမို့အိမ်ကကားနဲ့သာ သွားရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာ
ပဲ မောင်းသွားရလိမ့်မယ်။ တော်သေးတယ် အဖေ့အကိုဦးရူပ
အမှတ် နဲ့ ခွဲတဲ့ စနစ် ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါပြီ ။ ဒီနှစ် ၁၀တန်း
အောင်တဲ့ သူတွေ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ တက္ကသိုလ် တက်လို့ ရပါပြီ ။
လာမည့်ပညာသင်နှစ်မှ စတင်၍ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်
ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မိမိဝါသနာပါရာ
ဘာသာရပ်များကို အရည်အချင်းနှင့် ဆန္ဒအပေါ်မူတည်၍
ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းမျိုး ရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။